Nayakhabar.com: ‘प्रधानमन्त्री ज्यू ? सोर्सफोर्स लगाइदिने छैनन्, हाम्रो उद्धार गरिदिनुस्’ साउदी अरबमा ४५ नेपाली अलपत्र
‘प्रधानमन्त्री ज्यू ? सोर्सफोर्स लगाइदिने छैनन्, हाम्रो उद्धार गरिदिनुस्’ साउदी अरबमा ४५ नेपाली अलपत्र
काठमाडौं । रोजगारीका लागि साउदी अरब पुगेका सुर्खेतका इन्द्रबहादुर विक आजभोलि निकै पीडामा छन् । साउदी पुगेको ६ महिनासम्म उनले तलव पाएका छैनन् । आजभोलि त काम पनि बन्द भएको छ ।
इन्द्रबहादुरसँगै स्नाफ इन्टरनेशनल कम्पनीमा कामका लागि पुगेका ४५ जना नेपाली युवक त्यहाँ अलपत्र छन् । त्यहाँ ७ महिनादेखि तलव नपाएर अलपत्र पर्ने नेपालीहरु छन् । एकमहिना अघिदेखि खुला आकाशमुनि जीवन गुजारिरहेका उनीहरुले पेटभरि खान नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
काठमाडौंको एयरपोर्ट नजिकै रहेको जेभीआर म्यानपावरलाई १ लाख १५ हजार रुपैयाँ तिरेर त्यहाँ विकले खानका लागि घरबाटै पैसा मगाउन सुरु गरेका छन् । उनले पछिल्लोपटक नेपालबाट ५ सय रियाल ९१५ हजार नेपाली रुपैयाँ० मगाएका छन् । अहिले त्यसै खर्चबाट खाना खाएर बाँचेका छन् ।
साउदीको हाइलबाट विकले भने, ‘अहिलेसम्म त यहाँ वरपरका नेपाली दाजुभाइले सहयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो । तर, सधैं यो सम्भव छैन । कोही साथीले त घरबाट १५ रियाल ९५४ हजार रुपैयाँ०सम्म मगाएर खाइसके । कमाउन आएका हामी बाँच्नका लागि घरमा ऋण थपिरहेका छौं ।’
यसअघि उनीहरुले स्थानीय क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरुबाट सहयोग मागेर गुजारा चलाएका थिए । तर, साउदीमा बढ्दो आर्थिक समस्याले सबैलाई च्यापेपछि भने उनीहरु बाँचेर फर्किन पाए मात्रै पनि पुग्थ्यो भन्न थालेका छन् ।
‘नफर्किन म्यानपावरको दबाव’
उनीहरु सबैलाई जेभीआर म्यानपावरले साउदीमा गजबको कमाइ हुन्छ भनेर लगेको हो । सो म्यानपावरका प्रतिनिधि दीपक घिमिरे अहिले साउदीमा पुगेका छन् । तर, उनले कामदारको समाधान गर्नेभन्दा उल्टै कम्पनीकै पक्षमा बोलिरहेका छन् ।
घिमिरेले कामदारलाई फिर्ताको पहल गर्नुभन्दा त्यहीँ बस्न दबाव दिइरहेको नेपालीहरु बताउँछन् । कम्पनीले पनि घर फर्किनका लागि ६ हजार रियाल मागेको पीडितहरुले बताए । उनीहरु कोही पनि त्यत्रो रकम तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
उद्धारका लागि सोर्सफोर्स चाहियो
यसअघि उनीहरुसँगै झण्डै ५० भन्दा बढी नेपाली थिए । तर, उद्धारमा पनि विभेद गरिएको अलपत्र कामदारको गुनासो छ । उनीहरुकाअनुसार केही राजनीतिक चिनजान भएकाहरुलाई भने दूतावासको पहलमा उद्धार गरिएको छ । सोर्सफोर्स लगाउन नसक्नेहरु त्यही अलपत्र छन् ।
‘हामीले दूतावासमा पनि खबर गरेका थियौं, तर त्यहाँका मान्छेले तिमीहरुलाई उद्धार गर्न माथिकै सोर्सफोर्स र पावर चाहिन्छ भनेका छन्,’ विकले अनुनय गर्दै भने, ‘हाम्रा त सोर्सफोर्स लगाइदिने कोहि छैनन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशमा अलपत्र कामदारको उद्धारका लागि आदेश दिएको समाचार पढेको थिएँ । उहाँलाई हाम्रो दुःखको खबर पुर्‍याइदिनुपर्‍यो ।’